स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेसँगै केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन बाटो खुला, के भन्छ राष्ट्र बैंक ? - Arthatantra.com
स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेसँगै केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन बाटो खुला, के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
काठमाडौैं । सरकारले स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेसँगै केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन बाटो खुला भएको छ ।
साउन पहिलो सातासम्म ल्याउनुपर्ने मौद्रिक नीति असार अन्तिममा सरकार परिवर्तन भएसँगै धकेलिएको थियो । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भनेका कारण रोकिएको थियो । तर मन्त्री शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्र बैंकलाई सजिलो भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले यो साताभरीमा मौद्रिक नीति ल्याउने प्रयास रहने बताउनुभयो । यसको लागि आवश्यक तयारी भएको र यो साताभरीमा सार्वजनिक गर्ने प्रयास रहने प्रवक्ता ढकालले अर्थतन्त्रलाई बताउनुभयो ।
यतिबेला नीजि क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पुँजी बजार, सहकारी, सिने क्षेत्र, होटल व्यवसाय लगायतका सबै क्षेत्र मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा रहेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा आउने मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कस्तोखालको नीति लिने हो, डिजिटल नेपाल निर्माणमा केन्द्रीय बैंकले कस्तो नीति लिने हो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन २७ बुधवार ११:१० मा प्रकाशित
अघिल्लाे यूनियन लाइफको सेयर मूल्यमा सकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कति पुग्यो ?
पछिल्लाे फेरि सस्तियो सुनचाँदीको मूल्य, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?